Wararkii ugu danbeeyey suuqa kala iibiga ciyaartoyda | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Wararkii ugu danbeeyey suuqa kala iibiga ciyaartoyda
Posted by: radio himilo February 28, 2017
Muqdisho – Wararkii ugu danbeeyey ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda waxaa ugu waaweyn
CHELSEA Waxay hanan kartaa Bonucci
Tababaraha kooxda chalsea ee Antonio Conte iyo difaaca kooxda Juventus Leonardo Bonucci ayaa laga yaabaa in ay dib u midoobaan kadib markii uu soo ifbaxay warar sheegaya in ay isku dheceen laacibkaan tababaraha hadda ee Juventus Massimiliano Allegri
Juventus ayaa eegaysa in ay hishiis waqti dheer ah oo difaaca dhexe ah ay yeeshaan Mattia Caldara Daniele Rugani taas oo macquul ka dhigi karta in 29-jirkaan la fasaxo
ALDERWEIRELD oo heshiis cusub lagalaya Spurs-ka
Toby Alderweireld ayaa lagu wadaa inuu heshiis cusub u saxiixo Tottenham, sida laga soo xigtay Daily Mail.
Xiddiga reer Belgium waxa uu noqday xubin muhiim ah oo ka tirsan daafaca kooxda tan iyo markii uu uga soo biiray Southampton sandkii 2015, iyadoo Spurs laga dhaliyay kaliya 32 gool 26 kulan oo ilaa hadda ay ciyaareen xili ciyaareedkaan
Qandaraaska haatan ee Alderweireld ayaa ayaa lgu burburin karaa £25 milyan .
WENGER wuxuu leylin lahaa Madrid
Arsene Wenger aya jeclaan lahaa in ay qaataan kooxda boqortooyada ee Real Madrid hadii uu ka tago Arsenal, sida ay xiganeyso Telegraph.
Tababaraha kooxda Gunners ayaa la sheegay inuu hoos u dhigay shaqo £30-millon uu ka qaadan lahaa mid kamid ah kooxha ugu tunka wayn horyaalka Chinese Super League.
Waxa uuna doonayaa in uu guulo lasii sii joogo mid kamid ah kooxaha Yurub, isaga oo ku fakaraya Santiago Bernabeu.
JUVENTUS oo kusoo biirtay dagaalka loogu jiro weeraryahanka Fiorentina ee Bernardeschi.
Juventus ayaa kula biirtay Manchester United iyo Chelsea ugaarsiga ay ugu jiraan weeraryahanka Fiorentina ee Federico Bernardeschi, sida uu sheegay La Stampa.
Kubbad sameeyahan 23-sano jirka ah, ayaa dhaliyay 10 gool xilli ciyaareedkan taas oo u horseeday in laacibkan laga xiiseeyo suuqa kala iibsiga ayna ku dagaalmaan kooxaha ugu tunka wayn England iyo Italy.
Real Madrid oo £50m ku dooneysa Dembele
Real madrid ayaa £50million ku raadinaysa laacibka kooxda Celtic ee Moussa Dembele.
Weeraryahanka Celtic, ayaa sidoo kale lala xiriiriyay kooxaha Chelsea iyo Manchester United.
Xiddiga Celtic ee Moussa Dembele oo qiimihiisu yahay £50million waa uu ku wanagsan yahay inuu u ciyaaro Real Madrid, sida uu sheegay ninka ay isku kooxda yihiin ee Cristian Gamboa.
Dembele, ayaa ku riyaaqaya goolasha Scotland, isaga oo dhaliyay 15 gool 24 kulan oo horyaalka ciyaaray.
Waxa uu sidoo kale dhaliyay shan gool Champions League, taasoo keentay in lala xiriirinayay kooxaha Real Madrid, Chelsea iyo Manchester United.
Waxaa isku soo ururiyay: Abdi aziz Aadan Urur.
Next: Natiijooyinka Kulamadii Laga Cayaaray Horyaalka Dalka.